Koonfur Galbeed oo ka fal-celisay codsigii fanaan hore Axmed Biif oo hooyadiis... - Caasimada Online
Home Warar Koonfur Galbeed oo ka fal-celisay codsigii fanaan hore Axmed Biif oo hooyadiis…
Koonfur Galbeed oo ka fal-celisay codsigii fanaan hore Axmed Biif oo hooyadiis…
Muqdisho (Caasimada Online) – Maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in xabsiga la dhigay labo qof oo lagu eedeeyay in ay mas’uul ka ahaayeen falal uu cabasho kasoo gubiyay fannaan hore Axmed Biif oo hadda ka baxay fanka, lana baxay Axmed Kheyr.
Xarigga ayaa yimid, kadib markii uu muuqaal cabasho ah soo duubay Axmed Cabdikariin Maxamed (Axmed Kheyr) oo sheegay in Hooyadiis oo ku sugan magaalada Baydhaba uu dhibaato ku hayo nin ay xaas u tahay.
Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur, ayaa sheegay in ninkii hooyada Axmed Kheyr seygeeda ahaa iyo wiil kale oo dhallinyaro ah xabsiga loo taxaabay.
Wasiirka ayaa sheegay in Madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo dhammaan mas’uuliyiinta maamulkaas aysan marna aqbali doonin in qof sharaftiisa wax loo dhimo.
“Walaalkeen Axmed wuxuu ka codsaday Madaxweynaha iyo dhamaan masuuliyiinta reer Koonfur Galbeed, in dadkii dhibka u geystay gacanta lagu soo dhigo, waxaan cadeynayaa raali kama noqon karno in sharafta qof Soomaaliyeed dhib loo geysto, waxaan idiin cadeynayaa in dadkii dhibka geystay ay xalay ku baryeen xabsiga,” ayuu yiri Wasiir Ilyaas.
Wasiirka ayaa intaas ku sii daray, “Adeerkii garaacaayey hooyada dhashay Axmed Kheyr iyo wiil Cabdiqani Maxamed la yiraahdo oo Video-ga ku jiray, waa lasoo qabtay, labadaas nin waa xiran yihiin taallaabo sharci ah ayaana laga qaaday.”
Wiilka lala xiray ninka odayga ah ayaa lagu tilmaamay inuu yahay qofkii muuqaalka ka duubay, xilliga loo gacan qaadayay hooyada dhashay Axmed Kheyr oo ku nool magaalada Baydhaba ee gobolka Bay.
Muuqaalka uu soo duubay fannaanka hore Axmed Kheyr oo hadda wadaad ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn ugu faafay baraha bulshada, isagoo sheegaya inuu ciil iyo uur ku taallo la hoya waayey.
Sidoo kale muuqaalka laga soo duubay hooyada dhashay Axmed Kheyr ayaa muujinayey, iyadoo wiilkeeda ka codsaneysa inuu guri u dhiso, waxaana fariintaas ku qasbaayey inay soo gudbisay seygeeda oo codkiisa muuqaalka laga dhex maqlaayey isagoo leh “Ku dheh wiilkaaga halkaan – Baydhaba iiga dhis dheh guri.”
Hoos ka daawo wasiir Ilyaas